Ngaba kulungile ukulindela kakhulu kubantwana? | IBezzia
Ngaba kulungile ukulindela kakhulu kubantwana?
UMaria Jose Roldan | 17/09/2021 22:21 | Fundisa abantwana
Bonke abazali bayavuma xa bebonisa ukukhulisa nokufundisa umntwanaAyingomsebenzi olula kwaye ufuna umonde omkhulu kunye nonyamezelo. Ingqondo yomntwana iyakhula kwaye ngumsebenzi wabazali ukwenza umntwana kancinci kancinci ukuba akwazi ukwenza izinto ezahlukeneyo ezibanceda ukuba babe nenkululeko ethile.
Kuya kufuneka uyazi ukuba unomonde kwaye ungalindeli ukuba umntwana wakho afunde izinto okokuqala. Abazali abaninzi bahlala behlangabezana nengxaki enjalo kwaye kukuba ulindelo lwabo luphezulu kakhulu kunokuba benjalo. Kwinqaku elilandelayo siza kuthetha nawe ukuba kulungile ukwenza uthotho lwezinto ezilindelwe ngabantwana.
2 Abantwana ngabantwana nje
Akukho mntu uzalwe esazi kwaye yiyo loo nto abantwana bedinga uncedo lwabazali babo xa kuziwa ekufundeni izinto ezithile kwaye ukukhula kwabo kwinqanaba lobuchopho yeyona nto ifanelekileyo. Abantwana mabakhokelwe ngamaxesha onke ngabazali babo malunga nokufunda kwaye baqinisekise ukuba kule minyaka idlulileyo bafunda ukuzimela kwaye baxhomekeke kubo. Abantwana ngabantwana kwaye abazali abanakulindela ukuba bazokwazi ukuthetha nokunxibelelana nabanye xa beqala ukutshintsha. Ubuntwana yinkqubo ende efuna umonde omkhulu kwicala labazali, kuba ayisiyiyo yonke into efundwayo ngosuku olunye.
Alithandabuzeki elokuba ukuba ngumzali kunokuba ludiniso kubazali, kodwa ayisiyiyo incopho yokuba omncinci abekwe kwinqanaba eliqhubekayo lemfuno. Ngaphandle kokudinwa, abazali kufuneka babe nomonde ngalo lonke ixesha nabantwana babo kwaye balandele izikhokelo eziyimfuneko ngokubhekisele kuphuhliso kunye nokufunda.
Abantwana ngabantwana nje
Akukho nto inomvuzo kwaye ithuthuzela abazali njengokubukela umntwana wabo efunda izinto ezintsha mihla le. Ukwazi ukubona ukuba umntwana ukhula njani kwaye kancinci kancinci kuya kukwazi ukuzimela yinto entle kakhulu kuye nawuphi na umzali. Yinto eqhelekileyo ukuba abantwana benze iimpazamo amaxesha ngamaxesha de bafunde izinto. Yinto yendalo kwaye iyindalo emntwini kwaye hayi ngenxa yesi sizathu, abazali kufuneka banikezele okanye baphulukane nomonde.
Abantwana ngabantwana kuphela kwaye ngenxa yoko kufuneka baziphathe ngale nto bayiyo. Abazali kufuneka babeke bucala kulindelo olwenziwe kwaye bonwabele ubuntwana babantwana babo. Kule minyaka idlulileyo, abantwana baya kukhula kwaye inkqubo yabo yokufunda kunye nophuhliso iya kuqhubeka ukuxhomekeka ngokwabo.
Ngamafutshane, abazali abaninzi namhlanje benza impazamo enkulu yokwenza ulindelo kubantwana babo, ekuthi ekugqibeleni kungafikelelwa kubo. Ukufunda yinkqubo ende efuna umonde omkhulu kwicala labazali. Abantwana kufuneka bavunyelwe ukuba bafunde izinto ngesantya sabo ngaphandle kokuziva befuna kubazali babo. Ubuntwana linqanaba elimangalisayo lokwenene lobomi ekufuneka lifunyenwe ngabantwana nabazali ngokupheleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Oomama » Fundisa abantwana » Ngaba kulungile ukulindela kakhulu kubantwana?
I-Upcycling: izimvo ezi-3 zokuphinda usebenzise iimpahla ezindala
Thatha ithuba lokupakisha ekhaya